Maryland Cannabis Lawyer - Lalàna DC DC
Mpisolovava rongony Maryland
Miaraka aminay ny ekipan'ny mpisolovava Maryland kinner & McGowan hiresaka momba ny lalàna sy fitsipika mifehy ny cannabis Maryland sy Washington DC.
Cannabis any Maryland
Mpisolovava Maryland cannabis ekipa Kinner sy McGowan dia manantena ny amin'ny rongony fialam-boly any Maryland. Amin'izao fotoana izao dia fanjakana rongony ara-pitsaboana ihany i Maryland - ary niadana be ny raharaha. Nanomboka ny fandaharan-drongony rongony mpitsabo tamin'ny Maryland tamin'ny taona 2017, saingy mbola misy ny fahazoan-dàlana sasany. Androany, Tom sy Miggy dia niaraka tamin'i Meredith Kinner sy John McGowan mba hiresaka ny zava-mitranga any Maryland, Washington DC, ary ny faritra DMV.
FIVAVAHANA MISY: Florida Lawner mpisolovava
FIVAVAHANA MISY: Mpisolovava rongony Kentucky
Mpisolovava amin'ny tanànan'i Maryland
Inona ny Kinner & McGowan?
Firenena iray manam-pahaizana momba ny indostrian'ny cannabis
Manomeza torohevitra momba ny:
Natsangan'ireo mpisolovava Meredith Kinner sy John McGowan
Voatendry tamin'ny 2015
Foiben'ny any Washington DC
Rehefa misafidy mpisolovava rongony any Maryland ianao dia mila mitady izay mety aminao. Ity lahatsoratra ity dia hanasongadina ny sasany amin'ireo toetra manan-danja indrindra tokony ho tadiavinao rehefa manakarama olona hitantana ny raharaha ianao.
Ny mpisolovava tsara dia hanana traikefa betsaka amin'ny lalàna sy tranga rongony. Ny lalàna momba ny fihinanana rongony dia mety hampisavorovoro, saingy tsy manome lalàna; fa kosa natao hanoroana lalana. Ny mpisolovava tsara iray dia tokony ho afaka hanazava ny pitsopitson'ny lalàna amin'ny fomba laika.
Ny fanampiana ara-dalàna anao dia ampahany lehibe amin'ny fizotrany ary tokony handray an'io andraikitra io ianao raha mahatsapa fa ilaina izany. Mitadiava mpisolovava rongony any Maryland izay mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny asa eo am-pelatanana ary handeha lavitra mba hahazoana antoka fa afa-po tanteraka amin'ny serivisin'izy ireo ianao.
Ahoana ny fomba ifanarahan'i Maryland sy ny Firenena hafa amin'ireo fitsipika mifehy ny otrikaretina
Nikasa ny hanokatra ny fivarotam-panafody voalohany an'ny fanjakana amin'ny faran'ny taona 2017 ny manampahefana ao Maryland, saingy niadana kosa ny fizotrany noho ny olan'ny fihenan-tsakafo. Tafavoaka velona ny indostria ary nisokatra ny fivarotam-panafody voalohany tamin'ny taona 2018. Ity dia mifanaraka amin'ny lalàna nolovain'ny mpanao lalàna tamin'ny taona 2014 izay nametraka ny fototry ny fanarahan-dalàna ny rongony ara-pitsaboana tany Maryland sy ireo fanjakana hafa.
Mandritra izany fotoana izany, tany DC, tamin'ny volana septambra 2016, ny ben'ny tanàna Muriel Bowser dia namoaka torolàlana izay hampihena ny isan'ny marary rongony rongony azon'ny DC omena ao anatin'ny iray volana. Ity fanambarana ity dia niteraka sahirana be ho an'ny manampahefana eo an-toerana izay mila mitady fomba handaminana ny fikarakarana ireo marary izay mila fanafody medaly. Nanomboka nandinika volavolan-dalàna izay hahafahan'ireo marary ivelan'ny fanjakana miditra amin'ny rongony rongony ao amin'ny Distrika ny filankevitra fa marary ao an-tanàna ihany koa.
Tao amin'ny 2016, ny Vaomiera Medical Cannabis Medical any Maryland dia namoaka fahazoan-dàlana voalohany ho an'ny fanjakana fe-potoana voalohany momba ny rongony ao amin'ny Prince George's County. Na dia ireo aza Nanova ny tontolon'ny rongony rongony ny fanovana fitsipika, izy ireo ihany no nampitombo ny fangatahana rongony ara-pitsaboana any Maryland.
Inona no zava-misy ankehitriny amin'ny fanarahan-dalàna cannabis any Maryland
Ireo mpisolovava Maryland cannabis sy ny fahazoan-dàlana cannabis any Maryland dia nahazo vahana be tato anatin'ny taona vitsivitsy. Mandalo ny dingana faharoa amin'ny fahazoan-dàlana ny orinasam-pahefana mialoha, izay ahitana ny fanaraha-maso ny fikajiana ny heloka bevava, ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny fitsipi-pifehezana, ny fahazoana fahazoan-dàlana ao an-toerana, ny fananganana tanety ary ny fanatanterahana ny fepetra rehetra mifehy ny fitsipika. Ny orinasam-pahefana mialoha dia manana 365 andro hanatanterahana io fizotran-javatra io, ary ny MMCC hifidy fahazoan-dàlana farany rehefa mahafeno ny fepetra rehetra ny orinasa.
Raha atao an-tsaina izany dia mila manana fahalalana ny solontenananao momba ny fiantraikan'ny lalàna amin'ny trangao. Tena marina izany indrindra raha voasambotra noho ny fananana rongony.
Ny mpisolovava anao dia mila afaka manome porofo fa tsy mbola nisy fisamborana marobe noho ny fanananao rongony. Mety ho sarotra ny manamarina ny tsy fanananao tsiny raha toa ka mampiseho anao fa voaheloka imbetsaka ny rakitsoratrao.
Rehefa vonona ny handray mpisolovava ianao dia te-hitady olona manao ny marina sy mendri-pitokisana. Ny mpisolovava tsara dia mahay mampiasa ny rafitra ary mahay manolotra ny raharaha amin'ny fomba mampiseho fa tsy manan-tsiny ianao.
Ny mpisolovava tsara dia tokony hahafantatra ny tena dikan'ny heloka nataonao ary afaka manaporofo izany. Mila mpisolovava mahay mamolavola ny rakitra misy anao ary manolotra ireo fanazavana amin'ny fomba tsara indrindra.
Izay Maryland Cannabis Lawyer no hofidina
Ireo mpisolovava cannabis Maryland, John McGowan sy Meredith Kinner, dia efa nanao fanazarana ho mpisolovava tao Maryland sy DC nandritra ny dimy taona. Tamin'ny taona 2015 izy ireo dia nanangana orinasa boutique iray mifantoka amin'ny lalàna cannabis sy litera sivily. Nanomboka teo dia niasa tamin'ny lohahevitra isan-karazany ny orinasa, anisan'izany ny cannabis ara-pitsaboana, marijuana, ary fanabeazana cannabis.
Satria arakaraka ny lalàna mifehy ny lalàna momba ny valan-jaza sy ny vatan-jaza, dia mikasa ny hanitatra ny fampiharana azy amin'ireo fanjakana ireo ny orinasam-pitsarana, hoy i McGowan sy Kinner.
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny fivarotana cannabis dia mora toy ny famenoana endrika an-tserasera sy handehanana amin'ny dingana fankatoavana. Mety ho tafiditra ao amin'ny faritanin'ny fanjakana na amerikana koa izy io ary ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny orinasa.
Ny fironana manerana ny firenena mankany amin'ny fananganana ara-dalàna ny rongony dia namorona kolontsaina, orinasa ary fanentanana ara-dalàna miavaka. Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ara-dalàna ny rongony any Etazonia dia tsy hanjavona tsy ho ela izy ireo, hoy ny mpiasan'ny lalàna rongony Kinner McGowan.
Raha miova ny fenitra ara-tsosialy sy ara-bola ary ara-dalàna dia afaka manome ny fanohanana ilaina amin'ny fanampiana ny orinasa ny fanarahan-dalàna. Te-ho manana fahazoan-dàlana ve ny orinasan'ny cannabis ary mitoetra mifanaraka amin'ny sehatry ny ara-dalàna miovaova?
Mifandraisa amin'ny K&M raha mila fampahalalana bebe kokoa
K & M dia afaka manohana ny orinasa rehetra mikasika ny rongony - hatramin'ny fanombohana izay mikasika ny rongony hatramin'ny orinasa kely, ka hatramin'ny orinasa lehibe. K&M koa dia misolo tena ny ara-dalàna amin'ny rongony - ary misy fiatraikany amin'ny fanombohana sy ireo orinasa fiarovana miasa amin'ny sehatry ny rongony.
Ny haben'ny K&M dia ahafahantsika manome tahan'ny fifaninanana sy fonosana fanarahan-dalàna mifanaraka amin'ny haben'ny renivola isan-karazany. K&M dia fampiharana natokana ho an'ny lalàna rongony sy manohana ireo tompona orinasa sy mpandraharaha amin'ny sehatry ny rongony. Fantatsika ny loza mety hitranga sy ny vidin'ny fananganana orinasa amin'ity orinasa ity ary misolo tena ny mpanjifa amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa izay mihoatra ny fahazoan-dàlana.
Izany dia mety hanakana ny raharaham-barotra mety hitranga, ary koa ny tsy fahampian'ny fanandramana laboratoara. Etsy andaniny, ireo mpandraharaha dia hanana fahafahana handray anjara amin'ny orinasan'asa mahazatra, izay mifototra amin'ny angovo mifandraika amin'ny famokarana sy fitsinjarana ireo vokatra rongony toy ny fambolena, fanodinana, ny fonosana ary ny varotra.
Olona mifandray tsara izay azonao iantsoana dia solontenan'ny K&M. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia hanolotra ny fanampiana ilaina rehetra amin'ny fizotran'ny legalisasy rongony, ny fisoratana anarana amin'ny orinasa ary ny firafitry ny rongony.
Rehefa mitady fanampiana ara-dalàna ianao dia ho fantatray ny zavatra takinao sy ho fantatray ny fomba hifandraisana aminao araka ny tokony ho izy. Mifandraisa amin'ny K&M isaky ny mieritreritra ny hanakarama mpisolovava vaovao ianao.
Ny tatitra momba ny lalàna nataon'i Kinner & McGowan
Fialam-bidy momba ny varotra ara-tsakafo an-tsain'i Illionois $ 110 tapitrisa amin'ny Quarter of Legalization
Mampitsahatra ny fampielezan'ny filoham-pirenena i Bernie Sanders
Mpisolovava rongony Maryland - Vakio ny resaka
Ny ekipan'ny mpisolovava rongony Maryland dia manatevin-daharana antsika anio ary tadidio, ry zalahy mifikitra. Hanome vitsivitsy izahay. Samy izy io ary misy fantsona mandroboka raha mandefa mailaka an'i Tom ianao amin'ny collateral based dot com. Mickey, mahatsikaritra zavatra hafa momba ahy ve ianao androany?
Ankoatra ny sotobesinao snazzy?
Izao izany no izy. Tamin'izay aho dia nanomboka tamin'ny fantsom-panafana. Ka ahoana no ahitako ny ahitra miady any andrefana? Well?
fantaro, Norm vaovao isika rehetra, marina? Ah, vao sambany omaly aho, manana andalana lava isika satria Ah ah,
eny, fa ny hafainganam-pandehany Eny, tsia
Marka 60 fotsiny, saingy mihena kely izy ireo. Firy ny olona tonga indray mandeha amin'ny magazay samy hafa?
Loatra. Izaho dia. Mihena ny habaka farany amin'ny asa farany. Eny ary,
manao per footage izy ireo izao heveriko fa toy ny olona iray amin'ny 125 metatra toradroa na zavatra toa izany, saingy tsy hadalana izany, fa, um, zavatra iray izay nitranga. Um, ary tsy tiako ny milaza fa misy miafina izany, saingy heveriko fa ny olon-drehetra amin'ny ara-dalàna dia mahalala an'io zazavavy kely io. Um ah. Fanekena. Ary izany no Ah, Charlotte, Fidji.
Arlette. Oh, my gosh, izay no tao anaty vaovao ary niezaka ny hamely. Miampy eto. Ary noho izany dia milaza amin'ny olona momba an'i Charlotte aho.
Eny. Oh, Charlotte, Fidji koa fantatra, ah amin'ny tranonkalan'i Charlotte hafahafa noforonin'ny Stanley Brothers. Ary inona izany, fito taona lasa izay? Ah, ny azy. Ary ary izany fihenjanana izany dia nitondra ny CBD iray manontolo. Ah, revolisiona. Fantatrao, raha ny hevitro, um, fantatrao, tsy resaka Ah no noresahina, maro ny fanjakana toa, eh, Oklahoma. Oh, ity zazavavy kely ity. Fisaorana lehibe amin'ireo magazay CBD rehetra nananan'izy ireo taloha. Ah, nahazo fitsaboana izy ireo
Anarana. Nodimandry ny fanjakana ho an'ny tranokalan'i Charlotte. Vao 13 taona izy ary matin'ny virus Corona.
Ie, ny fianakaviany manontolo no nanana an'io. Toy ny iray volana izy ireo. Nofehezin'izy ireo izany. Ary avy eo tonga tany aminy ihany io noho ny hery fiarovan'ny vatana malemy. Saingy, eh, eny, heveriko ho zava-dehibe fotsiny ny tokony hahalalan'ny olona, ​​fantaro fa nandalo fotsiny ity zazavavy kely ity ary, Ah, betsaka loatra izy ireo.
Mampalahelo izany. Ary izaho koa dia somary nisy vaovao nampalahelo ahy. Ny fampiatoana marijuana ara-dalàna izay vao niseho androany nandoro an'i Anders dia mampiato ny fampielezan-keviny ho filoham-pirenena. Ka nanao an'io horonantsary io izahay toy ny vatomamy. Ataovy ara-dalàna izany. Andro voalohany. Ie, angamba. Saingy, tsy hahazo andro iray izy. Ary tena tsy nanao izany i Biden. Biden dia tsy nanohana ara-dalàna ny rongony.
Fantatrao, fa mbola mahazo ny karazana masinina rafitra iray ihany aho. Bullshit dia manaikitra am-pahatsorana. Ary tiako ho lazaina ny 1200 $ ny entana rehetra. 10 no manamarina ny lafiny sosialy rehetra sy resaka. Fantatrao, eto isika dia misy fizahana 20 $ 100 momba ny resaka bullshit resaka isam-bolana,
sa tsy izany? Right. Miaraka amin'ny volabe $ 1200, fantatrao? Fa io ihany no mitranga ry rangahy. Ary avy eo ny zavatra sasany dia tsara. Tany Illinois, dia nahazo, 110 tapitrisa isika tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny famelana ara-dalàna, ka tsy ratsy izany. Fantatrao, 110 tapitrisa sahady, eh, mahazo multiply izany amin'ny efatra ary mahazo 500 tapitrisa eo ho eo ianao amin'ny varotra taona voalohany an'ny fanjakana. Izay lehibe. Tsara hajaina. Tena nanantena aho fa nanao toa 6 ka hatramin'ny 800 tapitrisa izahay. Nefa raiso, ralehilahy.
Fa heveriko, fantatrao, miaraka amin'ny tsena amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny rongony, ny rongony dia toy ny alikaola ihany, sa tsy izany? Ho tsara foana izy ireo satria ny olona te hividy na hifoka, hisotro sy hifoka mandritra ny fotoan-tsarotra sy fotoan-tsarotra. Yeah. Ah, amin'izao fotoana izao, heveriko fa mahita ny fiakaran'ny haavony fotsiny ianareo, sa tsy izany? Ny olona dia mandala ny volany fotsiny, ary avy eo hitsangana indray rehefa miverina amin'ny azy ny olona rehetra
toe-javatra. Eny, nahita mpamily adala toy izany aho handeha hiasa anio satria mpisolovava aho. Ie, Ary toy izany koa, toy ny fianianako, misy maro kokoa ireo olona mamo fotsiny eny an-dalana izao, na tsy manome f fotsiny izy ireo. Midika izany fa izy ireo dia manerana ny faritra rehetra
toerana. Garrity aho. Betsaka ny misotro toaka isan'andro.
Oh, yeah, yeah, fa fantatrao koa ny zavatra hafa? Ah, nivoaka indray. Ity dia efa noresahinay. Fa izao, tratra ny politika. Ka ny areti-mandringana dia mampiakatra ny fananganana ara-dalàna ny vilany. Ka io no politico androany ary betsaka amin'izany no noresahinay, tena sarotra tokoa ny mahazo ireo sonia ireo ary enina metatra miala ny olona iray sy ny olona maimbo ianao. Saingy efa nanana an'i Jared Moffett isika roa herinandro lasa izay, ary nilaza taminay izy hoe inona avy ireo fanjakana efatra mbola manana izany amin'ny bileta? Hanana chef avy amin'ireo fanjakana efatra ireo isika rehefa manakaiky, satria ny tsirairay amin'izy ireo dia manana ara-dalàna vaovao izay hapetraka na hampiasaina amin'ny fitsaboana na ho an'ny olon-dehibe. Ary te-hiteny aho fa i Arizona, South Dakota, ary nahazo zaodahy avy tany Yankton, South Dakota, Ka tsy andriko ny hahazo ilay fizarana mpisolovava any South Dakota Cannabis Lawyer. Ho tsara izany. Ary avy eo aiza koa? New Jersey. Oh, eny, iray Maur, izany no tsy azoko. Izany ve, fantatrao, niaraka tamin'i Mississippi. Marina izany, eny, mpitsabo any Mississippi. Tsy andriko ny hamakafaka izany. Mety hitovy amin'ny Kentucky User, West Virginia aho na ireo izay malaza any atsimo. Na ny lalàn'i Florida aza dia nanomboka tsy nisy lafarinina.
Inona no mahatsikaiky kokoa any Kentucky? Ah, vao navotsotra toy ny gadra 1000 ry zareo noho io virus io. Shit. Tsy misy diky. Ie, olona tsy misy herisetra 1000, izay tsara. Uh, heveriko fa mandroso, Ah fotsiny, mampihomehy ny filazan'ny fandraran'ny olona iray na tsara amin'ny lafiny iray avy eo amin'ny lafiny hafa.
Yeah. Yeah. Ary ny sasany amin'ireo fandrarana ireo dia toa an'i Florida hanamaivana, nitatitra ny valiny fahefatra sy ny fitantanam-bolan'ny taona 2019. Ary avy any Tallahassee, ny fidiram-bolan'ny 80 tapitrisa dia namboarina tamin'ny isa 36 tapitrisa. Eny ary, tena mety nahazo tombony tokoa izy ireo. Mety hahaliana izany raha tena nahazo tombony izy ireo.
Eny, ny vondron'olona lehibe dia tafondro ankehitriny, hoy aho
Tsy fantatro. Hihady ny valiny ampahefa-potoana fahaefatra avy amin'ny Sure aho, hiala kely taty aoriana. Saingy izany no an'ny mpanohana, rangahy.
Yeah. Oh, eny, marina izany. Eny, eh, miresaka. Nanaraka ny podcast an'i Josh Kates aho, fantatrao fa izy no manao ny zavatra rehetra mijery ny tsena.
Ie, Ie, tsy maintsy avelantsika hiverina izy ary hanao, ah, manavao ny vaovao toy ny rongony. Ka taonina, Fa fampisehoana tsara izy. Ny tiako holazaina dia izany ny fefy miresaka. Ny podcast-ny.
Yeah. Ie, ary tsy dia mahazo analytics sy be dia be izy, ah, tato ho ato, toy ny, eh, indray, ny olona rehetra dia voa mafy nandritra io dingana io. Mampihena ny toerana sasany, indrisy, ny sandan'ny sandanao dia miakatra satria efa kely loatra ny vidin'ny overhead anao ankehitriny. Um, eny, izany no hitany. Tsena antonony marobe, voadona ireo orinasa lehibe. Ary ny sasany amin'ireo amerikana dia karazana tsy nitombina.
Eny, eny, ny tiako holazaina dia zavatra hafa. Maniry aho fa hanana fahazoan-dàlana rongony vitsivitsy izao satria mamindra vokatra be dia be toa ny an'ny tsirairay izy ireo. Fantatrao fa porofon'ny fitotonganana io, ary raha ny marina, dia. Izy io dia fomba fiatrehana ny adin-tsaina, noho izany ny olona dia mety mividy bebe kokoa rehefa voan'ny adin-tsaina izy, mifanohitra amin'ny fotoana tsy anisany. Fantatrao?
Fantatrao ve ny dikan'izany rehefa mifoka ianao rehefa kivy,
ampiasainao ara-pahasalamana izany.
Saingy marina. Marina izany. Toa ahy, e, raha tsy nahazo na inona na inona aho. Vao nilalao aho. Ny tiako hambara,
fantatrao, karazana ny fomba Io no mahazatra vaovao. Toy ny misy anio ihany. Ary avy eo dia nisy omaly. Andro inona izany? Mijanona tsara,
Alarobia izao tokony ho tamin'ny roa ora. Of
Mazava ho azy. Izany no mahatonga antsika eny amin'ny habakabaka. Raha tsy nanana an'ity seho ity isika dia tsy ho fantatsika hoe tamin'ny firy izany.
Tsy manana famantarana mahatsikaiky aho. Dude. Fantatrao, miseho foana aho, satria fotsiny, eh, hatsangako ianao, fa izaho kosa lehilahy iray ao amin'ny laboratoara iray.
Yeah yeah. Izaho, eh mpisolovava amin'ny Internet aho ary mpanolo-tsaina, noho izany dia teto kely aho. Fa fantatrao ve? Fantatrao ve ny tena hook? Tokony ho hitanao ny fomba hamatorana fehy tsipika rehefa mihantona ianao, ary avy eo dia hahazo Bovis ihany koa ianao ary mety fantsona ah doob. Andao hojerena. Manana ny azontsika atao ve ny mametraka io faneva io raha mbola manana izany isika. Ao ve izany? Tsia, misy izany, Tsara izany. Manodidina ny $ 3 handefasana ireto mpampinono ireto. Ary avy eo zavatra iray hafa izay hataoko tsara amin'ity sy mandrakizay. Tadidinao io boky nataoko io? Fantatrao, novakianao, toy ny, 10 taona lasa izao? Ie, 10 taona, fa ho azoko ny sasany amin'ireo izay setrain'i satana. Avy eo isika dia afaka manome ireo izay any amin'ny faran'ny fampisehoana. Toy ny hevitra izay noheverinay fa ilay dist mahatsikaiky.
Salama e. Midina aho.
Yeah. Eh, olona efatra ny antony hanomezana hevitra.
Toy izany koa, toy ny, um, ara-dalàna ary ny fanintsanana. Ah, ahoana ny hevitrao momba io zoro kely io, toa an'i Washington ao Maryland sy Virginia?
Oh, ralehilahy, goavambe io zoro io. Ary zavatra tsy fantatro izany rehetra izany. Ary tena faly aho fa afaka hianatra bebe kokoa momba an'i Maryland sy New York i Thio. New Jersey, Pennsylvania. Angamba ho fantatr'izy ireo daholo. Ary avy eo, mazava ho azy, miresaka momba ny lalàna momba ny rongony isika indraindray. Izay anaovantsika azy. Vinavina be fanabeazana tsy haintsika izany, fa ny mpitsidika antsika tokoa. Ka maninona isika no tsy mitondra azy ireo ary manomboka? Ah, atombohy ny dinidinika, sa tsy izany? Yeah.
Hey, misy inona, Dom? Lauren, manao ahoana ianao?
Manao tsara aho. Misaotra betsaka anao nandeha Nani. Meredith? Yeah. Noho izany
marina izany. Mihidy ny zava-drehetra.
Yeah. Ka inona no ataonao ry zalahy?
Manana fampiharana lalàna ganja be fandroana izahay ao amin'ny faritry Maryland DC Virginia. Manana foibe any DC izahay saingy efa manodidina ny 2015 izahay no miasa, fantatrao, ao amin'ny sehatry ny fitsaboana any Maryland. Ary, fantatrao ihany koa, hemp indostrialy. Ary ny CBD ary ary D. C koa. Eny e. Ie, tianay izany. Efa nivoatra tamin'ny fomba hafahafa izy io, saingy mahafinaritra ny eo am-piandohan'ny, fantatrao fa mahazo ny farany.
Ie, mihetsika haingana izy, sa tsy izany? Eny.
Ianareo kosa dia nanapaka ny DC linoo, marina. Fanambadiana.
Izahay dia momba ny toerana nizoranay ny fototra niorenanay fa voarara Afaka manao fanazaran-tena any Maryland isika. Oh,
onja izy ireo. Antso ve izany? Mandeha io. Saika eto aho izao. Salama? Um, marina. Eso Ahoana no ahafantaranao ny fahaverezan'ny D C. Cannabis, avy eo
tena mahay an'i Maryland ary mora.
Eny ary, ara-dalàna ao amin'ny D. C, fa tsy ara-dalàna ny fivarotana azy. Inona no ifanarahana?
Inona ny fifanarahana? Um, Honey, te-hanomboka ve ianao sa
hahazo avatar isika ka marina ny ahy
miverina any DC Dia tavela. Tsy fantatry ny olona izany, na raha fantany dia tsy tena takany ny dikan'izany, hitanao fa tsy fanjakana. Toy ny faritany iray kokoa izahay. Ary ny tetibolam-panjakana eto amintsika dia ao anatin'ny tetibola federaly. Ary toy izany rehefa d c. Raha nanana refy fandrefesana vato 71 tamin'ny vato tamin'ny taona 2014 dia nandalo be izany ary nanomboka nanan-kery. Um, tamin'ny taona 2015. Tamin'ny tetibolam-panjakana federaly 2015 dia nisy mpanoratra iray nanakana an'i D. C tsy hampiasa volan'ny kaominaly hifehezana ny tsy fampiasana marijuana. Ary noho izany antony izany izao dia manana lalàna manatanteraka tena isika. Satria ny zava-drehetra nataony dia nasiam-panitsiana ny kaody heloka bevava hahafahan'ny olona manana marijuana roa grama hatramin'ny 21 taona ary mamindra mari-pana iray grama. Ary izy ireo dia avy amin'ny fepetra fambolena any an-trano ihany koa. Saingy tsy azonao atao ny mivarotra na mivarotra rongony amin'ny karazana karama ho an'ny olon-dehibe any, fantatrao fa tsy misy fanomezana. Izy io dia. Tsy azonao atao rongony ny sandany.
Reko fa ianao Ah, manana paty sy tsaramaso lafo be tokoa izany
misy vitsivitsy stickers sy tsaramaso lafo vidy. Eny, oh, izay no fomba iray anaovana izany. Betsaka ny olona no nanandrana nametaka tena ho an'ny $ 40 azonao raisina, fantatrao, i Nathan cannabis miaraka amin'io sticker iray io no tadiavintsika. na iza na iza
manana baolina, ianao dia ho toy ny tsy nivarotako azy shit dia namidiko azy ny kitapo Ziploc $ 40. Izany
nitranga am-pitiavana tapa-taratasy $ 40. Ny karazana anao mety ho toy izany koa
ny fiantraikany ao. Eny,
marina. Inona? Ny tena zava-dehibe aminao dia toa ara-dalàna izany. Tohave it. Ara-dalàna izany. Ara-dalàna ny mitombo. izany
hitombo ara-dalàna izy io. Ataovy ao amin'ny tanànanao ara-dalàna izany.
Ny jiggle, ny penina Vape ao an-trano.
Tsia, ao amin'ny trano manontolo, na izany aza, satria oh, eny, izany fa jereo, izany no karazana
ny fitongilana mitovy amin'izay nitranga tamin'ny Prop 2 15, ny olona dia toa, Oh, eny, tsy afaka mahazo vola amin'ny rongony ianao satria ara-pitsaboana na ah ah, altruistic, izay aho dia handoto tanteraka,
sa tsy izany? Fa ny olana dia izao isika dia manana an'ity. Ity dia mbola manana an'io ady io maninona no navela hahita fidiram-bola amin'ny marijuana fialamboly, sa tsy izany? Satria ny olana dia raha mivarotra sticker ianao dia mety tsy voasoratra anarana hifikitra. Mazava fa manipy izy ireo. Nilaza ianao fa afaka manana izany izy ireo. Nilaza ianao fa afaka
omeo. Ataon'izy ireo izany, fantatrao. Saingy ataon'izy ireo tsy voafehy izany. Lee,
sa tsy izany? Ary nisy orinasa sasany fantatrao fa manao izany bebe kokoa. Fantatrao, lavitra lavitra ny lafiny tongotra hatramin'ny tongony izy ireo eo amin'io lafiny io, ary mankany amin'ny tsena tsy ara-dalàna izy ireo. Saingy mbola izany ihany. Oh, tsara. Fantatrao, izy ireo dia sisa tavela amin'ny faritra mampidi-doza amin'ny mofo, tsy dia atahorana ny volondavenona.
Eny, tiako holazaina fa, amin'ny iray amin'ireo indostria ireo dia tsy maintsy misy ireo tovolahy ireo izay eo amin'ny faritra fotsy. Fantatro ny fomba eto. Sakaizan'ny mpilalao sarimihetsika, Lance Galore, raha niasa ara-pahasalamana teto. Ah, nampiasa mpisolovava izy hanampy amin'ny famoronana fotodrafitrasa. Ary amin'ny farany, mbola nanome naoty federaly izy, ary mbola mandefa sazy 10 taona izao.
Ie, marina. Fanjakana federaly daholo izany. Ka tsy izany Tsy maninona. Ary manana ny fiheveran-diso ny olona fa na izany aza, satria i D. C dia ilay sehatry ny governemanta federaly izay nahatonga azy io ho toy ny hoe manangona am-ponja ny lalàna federaly. Fantatrao fa ny teti-bolanay dia ampahany amin'ny tetibola federaly sy ny asshole kely momba an'i Moreland avy amin'ny Congress Person. Efa nisotro ronono izy io ary nanohana marijuana ara-pitsaboana. Ary na dia efa nisotro ronono aza izy dia mbola ao ihany satria ny làlan'ny Senat izay fihodinana farany ity.
Eny, andao hiresaka ah, tsy dia mifanditra loatra, satria akondro fotsiny io. Fahadalana amin'ny zavatra iray. Ary izany no mifanaraka amin'ny taranja. Governemanta federaly. Eny. Manakaiky i Maryland. Johnny, misaotra anao niverina teto. Miala tsiny fa tsy mety aminao ilay horonantsary, saingy tsara kokoa izahay izao. Eny ary, izao dia toy ny sary famantarana ho an'ny ahy ianao ho an'ny orinasan-tseraseran'ny orinasa Mari. Saingy, eh, na izany aza, maninona ianao tsy milaza aminay ny amin'ny tanànan'ny Maryland nanangana ny rongony very.
Andriamanitra ô. Erlend dia tsy manana afa-tsy programa rongony ara-pitsaboana. Fantatrao fa tsy misy fampiasana olon-dehibe na lalàna hafa mitovy amin'ny DC Mess ananantsika. Ka i Carolyn's, eh, Maryland dia tao amin'ny Internet nanomboka tamin'ny taona 2017. Manana dispensaries 90 eo ho eo izy ireo. Mbola misy ihany ireo mila fahazoan-dàlana. Manana dispensary 90 eo ho eo izy ireo, mpikirakira 18, mpamboly 18 ary saika hamoaka fahazoan-dàlana bebe kokoa ho an'ireo mpamboly sy mpikirakira azy atsy ho atsy.
Fantatrao, fa *** nanambara ireo satria tamin'ny herintaona lasa teo, dia manana varavarankely izay nandraisan'izy ireo fampiharana sasany ary noheveriko fa mitafy ny volana jona 2019 raha tsy mbola nilaza ireo mpandresy ireo?
Tom, afaka mameno seho ity. Lazaiko anao inona ny maherifonao? Izay tsy nahazoako azy ny fisehoseho fohy. Raha mila tanana ianao, azafady. Amin'ny ankapobeny, Tom, marina ny anao. Amin'ny ankapobeny dia ireo fahazoan-dàlana izay navoaka Thio License D's any Maryland. Betsaka amin'izy ireo no tsy nomena, um, fantatrao, rehefa efa manana na orinasa manana vehivavy ianao. Ary nisy fitoviana lehibe teo amin'ireo mpandraharaha lehibe multistate nahazo ireo fahazoan-dàlana ireo sy ireo mponina teo an-toerana, ivon-toeram-pandraharahana madinidinika, nahazo ireto siansa fiainana ireto. Ary noho izany, fantatrao fa be ny tao ambadika. Betsaka ny lalao nilalaovana, saingy taty aoriana dia namela fahazoan-dàlana 14 fanampiny ny mpanao lalàna. Mpamboly efatra sy mpitrandraka 10 ho an'ny orinasa mahafeno fepetra izao. Anisan'ireo fepetra takian'izy ireo fa aleony manome tombony ireo mpangataka fananana vitsy an'isa sy mahantra, izay misy ny torolalana rehetra fantatrao. Fa ny tena zava-dehibe, fantatrao, raha toa ianao ka mpangataka fatiantoka fadiranovana vitsy an'isa marina, midika izany fa tsy 1.7 tapitrisa na mihoatra ny haratanao. Ary ianao dia ah, tafiditra tao anatin'ny iray amin'ireo vitsy an'isa napetrak'izy ireo tamin'ny fangatahana ianao. Ny fangatahanao dia mety hahazo karazana isa bonus. Na izany na tsy izany, nokasaina hanambara ireo mpandresy ireo izy ireo tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa, teo alohan'ny fanambarana mialoha, raha sitrakao
,, huh, ara-bakiteny ny
nisy Nisy ny didy navoakan'ny fitsarana boribory tany Maryland izay nilaza fa, fantatrao, izy ireo dia noho izy ireo nenjehina, Ah, fantatrao fa mpanao kolikoly na, fantatrao, ah, fizotry ny fampiharana. Ary amin'izao fotoana izao, satria ny, eh, fantatrao fa nesorina ny komisiona satria manana fe-potoana voafetra ihany izy ireo. Ary tamin'ny volana Oktobra, taorian'ny namoahana izany didy izany dia tsy komisera intsony ireo kaomisera 13 nipetraka. Izy ireo dia rava. Ery. Tsy ny fananana fotsiny, ah, fitoriana, tsy misy fahazoan-dàlana navoaka. Ary tsy nanana komisiona izahay. Nipetraka izany. Um, napetraka fotsiny ny zava-drehetra, fantatrao fa niditra tao anaty rambony ny zava-drehetra, ary nanomboka teo dia tsy nisy lisansa navoaka, nefa heveriko fa MEREDITIA, te-hameno ny antsipiriany momba ny zava-nitranga ve ianao?
Yeah. Ny tiako holazaina dia tsy fantatro, Tom, raha manana Eny ianao,
izany no Ah, azoko Ity avy amin'ny Mr Pells Show ary ny dadako indraindray mijery an'io fampisehoana io ary manomboka. Maharary ny diky, fa mampihomehy i Maryland
akaikin'ny vaky fotsy, rangahy. Midika izany fa izao dia mbola tsy manana fahazoan-dàlana izy ireo. Izy rehetra dia mandrakotra rehetra nanomboka ny taona 2015 ary ny 16 dia mbola tsy dispensaries manana fahazoan-dàlana mbola tsy nahazo alalana. Ary izao ity vatolampy iray manontolo ity, ny fahatezerany amin'ny fanenjehana any mihoatra noho izay misy azy ireo
ho be ny fitoriana any Illinois. Misy ny sazy Fa be dia be ny fitoriana any Maryland ankehitriny, ary azoko lazaina aminao ny antony iantsoana azy io vola an-tapitrisany dolara maimaim-poana. Manana izany fahazoan-dàlana izany ianao ary mbola tsy izahay ary fantatrao ny fomba fitantanana ny fandidiana nolazainao. Aorian'ny hetra rehetra aloa dia misy $ 1,000,000 Jack. Tian'ny olona izany. Fantatrao fa naniry aho
fahafaha-manao na izay, fantatrao, ary avy eo dia izay ilay efa Izay. Ny lesoka dia tsy nomeny fotoana mitovy ny rehetra ahazoana ireo fahazoan-dàlana ireo, izay afaka miova, fantatrao, ny taranaka afaka miova.
Izay no iray amin'ireo antony mahatonga ahy mieritreritra fa nahavita i Illinois. Tahaka izany ny Hitan'izy ireo izany olana izany ary nanerana ny firenena izany. Ny tiako holazaina dia satria hanana olona isika. Tsy mbola nisy olona iray avy aminay l A, eh, nitondra olona avy any LA On. Ary avy eo manandrana mitady mpisolovava Mendoza izahay. Izy ireo dia manana azy amin'ny fampisehoana, saingy ao no fehezin'ny mozika bebe kokoa. Ary noho izany dia nanandrana nampiditra ny fahamarinana ara-tsosialy tao amin'ny kaominina tao LA izy ireo ary tsy haiko hoe nanao ahoana izany. Saingy tany Illinois, dia nampidirin'izy ireo tao amin'ny rubric metric ny isa ara-tsosialy tamin'ny heviny fa raha tsy manana izany olona vitsy an'isa izany ianao, na antsoinay ho mpangataka ara-tsosialy ara-tsosialy any Illinois izy ireo ary manamboatra azy io amin'ny fomba tsy miandany amin'ny hazakazaka. Saingy amin'ny fomba iray, izay mety hidika hoe firazanana voafaritra iray ianao na efa nisy fiantraikany ratsy tamin'ny lalàna tamin'ny fisamborana anao noho ny rongony, mazava ho azy, fantatray fa ny statistika dia ny fisamborana rongony, ary satria fantatsika ireo antontan'isa ireo dia azontsika atao ny manaloka ilay hazakazaka dia eo angamba amin'ny ankapobeny. Ary noho izany dia nataon'izy ireo tamin'ny fomba afaka tamin'ny ah, fanamby amin'ny lalàm-panorenan'ny hidiny, ary noteren'izy ireo ny olona hametraka ireto olona ireto ao amin'ny ekipany, izay tsara indrindra
fa i Illinois, miaraka amin'ny sisan'ny sisan'izany ihany koa. Ny tiako holazaina dia hoe resaka fialamboly no resahinao raha mieritreritra ianao
Tsy miresaka afa-tsy izao aho izao dia fantatrao, zavatra ara-pahasalamana tsy nanana na inona na inona hitafy azy, ary noho izany dia hanana karazana mitovy aminy isika avy eo, eny, ny fitsaboana dia ny olona manankarena daholo. Fa avy eo indray, tokony ho tsapanao fa vao nilaza aho hoe misy $ 1,000,000 miaraka amin'i Jack maimaim-poana. Tiako izany. Matetika izy io dia miaraka amina fifanarahana marobe sy olona be pitsiny izay mipetraka eo manandrana miaro.
Fa izy ireo koa dia nanana, toa, fantatrao, manirery. Tsy programa momba ny fampindramambola sy fandaharana fanampiny efa antitra izay aho, toy ny fampisehoana fa niaraka tamin'ny lalàna Illinois ianao.
Mila mandresy aloha ianao ary avy eo toy ny fisamborana 20 amin'ny lafiny iray ihany. Ka, toa azonao atao ny miditra amin'io renivohitra io aorian'ny zava-misy. Ka ahoana no ahazoanao ny fahazoan-dàlana momba ny renivohitra? Tokony hahatratra 22 izany
na dia tiako aza ny mijery ny fomba nanapahan'izy ireo ny kaody zip sy ireo faritra sahirana ara-toekarena, farafaharatsiny any Chicago, somary fantatro ny Lago fantatro fa ny manodidina ny nenitoako ao High Park dia iray amin'ireo zavaboary ireo ary Toy ny hoe, Marina izany, fantatrao, toa an'i Barack Obama, ambany be toy ny shit ihany, fa ny tsy fahampian'ny laza eto, University of Chicago dia ao anatin'ny iray amin'ireo pendant lava kokoa sy mahaliana kokoa, fantatrao, rehefa nankany amin'ny iray ianao fantatrao, fa ny ady amin'ny brutes izay manamboatra azy dia misy, fantatrao, faritra, eh,
Ny lalàn'i Maryland dia misy, toy ny fisorohana ny ampihimamba any Illinois, toy ny Tsia,
tsy avelany hivezivezy ara-pahasalamana ny lehilahy. Tsy avelany intsony ny fifanarahana fitantanana. Saingy io asa io, ny ankamaroan'ny zava-mitranga ankehitriny dia izy ireo, ry zareo, dia matahotra izy ireo fa ireo mpandraharaha mahafinaritra kokoa ireo dia manana strawman izay.
teny vitsy an'isa ao amin'ny Maryland izay tena tsy miraharaha miaraka amin'ny andraikitra manandanja ao amin'ny tena asan'ny
Ka karazana famaranana ny fitantarana ny misy antsika ankehitriny, am-pahatsorana, satria tena nahaliana be izany tamin'ny faran'ny taona lasa teo raha samy nanandrana namantatra ianao hoe fantatrareo, aiza no alehan'izy ireo amin'ireo lisansa isan-karazany ireo, fantatrao hoe iza ny komisiona vaovao ary izany rehetra izany. Solontena Cheryl Glenn, izay mpikambana tao amin'ny Black Caucus. Fantatrao ve, ny Antenimiera mpanao lalàna izay nanery ny hanaovana ireo fahazoan-dàlana ireo na dia misy aza? Ny reniny no ilay anarany. Io ilay Natalie Imola Prod. Vaomieran'ny rongony any Maryland. Tena mafy, ny anarako dia toy ny, fantatrao, amin'ny lohateny, izy, eh, nanao fifanarahana fifonana, noho ny fiampangana kolikoly sy kolikoly satria, nandray kolikoly tamin'ny lazaina ho mpandraharaha multistat izy. lazaina fa
Inona? Inona ity? Ny tsenan'i Marilyn. Ary fantatrao izany,
marina. Ka io fotsiny no antony manosika. Ary noho izany ianareo rehetra mipetraka eto miresaka momba ny fomba tsy hanomezantsika ny fahamarinana avy amin'ny fontsika soavaly ambony momba ny fitondran-tena sy ny lalàna. Mandritra izany fotoana izany dia misy tompona orinasa. Vita ny amin'iny. Handehandeha 500 ry zareo eto. Tena mahatsiravina raha tsy naka an'ity vola ity ianao, fantatrao,
fomba tarehimarika. Marina? Satria ilay bandy
Massachusetts, ny fomba nandrenesanao momba an'io Ben'ny tanana Foxx, Grove, Massachusetts io. Toy ny nampihoatra azy an'arivony izany
aman-jatony dolara. Toy ny, toa an'i Johnny, $ 38,000 izy
samy 42,000 izy ireo
fiara lehibe toy ny fiara tsara tarehy
toy ny fiara manarato Yeah yeah.
I Washington dia manana ny dikany manokana momba izany eto mandritra ny fotoam-pitsaboana midina amin'ny lafiny atsimo. Saingy teo amin'ny fampiharana ny lalàna. Oh, Lattimer mandoa milalao satria fantatr'izy ireo hoe aiza no misy ny maniry. fa
amin'ny alina, Ie, mandrindra ny GI amin'ny ankapobeny. Toy ny hoe tsia, marina izany. Fahafinaretana.
Misaotra anao. Miaraka amin'i Cheryl Lynn. Izao ve izao? Ity dia karazana fanohanana Inona? Inona? Ireto mpisolovava ireto dia milalao fa misy ny kolikoly miaraka am-perinasa. Right. Ary izy sy ny filohan'ny kaomisiona, izay mbola nibebaka niaraka tamin'ny iraka, dia tsy niafina tamin'ny 2008. Farany 18 ary niaraka tamin'ity orinasa ity izay nanome kolikoly azy tamin'ny solontena iray. Ary izany dia toa mahatsiravina fotsiny amin'ny komity. Tsy mbola niresaka an'io mihitsy.
Ka ny fananana rehetra dia fananana tsy voafetra. Ary misy famotopotorana telo momba ny fizotran'ny fangatahana ataon'ny vaomiera, ary ho hitantsika ny zava-mitranga.
Ie, tsara, andao hiresaka momba ny fomba mety hitenenan'i New Jersey an'i Maryland hitazona ny labiera any aoriana any, Ha? Ka, toa, inona no fantatrao momba ny hidim-panafody New Jersey?
Tena kely. Izaho dia
kely tsy misy. Ny tiako holazaina dia ny fifantohana fantatrao fa hanara-maso an'i West Virginia, Pennsylvania isika. Ianao ve
bandy manao fampiharana any West Virginia? Nisy mpivady ireo, saingy safotry ny safidin'i Illinois izahay
Fomba tianay. Izahay tsy nanao izany. Tsy tiana hanao izany izahay. Um
eh, fantatrao fa toy ny teboka lava ny mametram-panontaniana bebe kokoa momba an'i Maryland, izay itovizany ihany, eny, ananantsika izy ireo, saingy tena tsy manana na inona na inona isika. Ary toy izany koa. Moa ve noho ny fahazoan-dàlana voafandrika? Ka, toy ny, tsy maintsy mahazo dispensary aho. Mila mamboly fanelingelenana aho.
Eny, marina. Yeah. Fahazoan-dàlana momba ny fikirakirana, fahazoan-dàlana am-pitaterana ary fahazoan-dàlan'ny mpamboly. Izy ireo ihany no fantatrao, tafasaraka. Mila manao fangatahana misaraka ianao. Ary avy eo, fantatrao fa mahazo fahazoan-dàlana fitaterana azo antoka raha te-ho fitaterana ianao. Nandalo izy ireo vao tsy ela akory izay. Ah, edibles. Ny lalàna momba ny fihinana any Maryland ka mbola tsy nisy. Saingy ho avy an-tsipika izany. Mety hieritreritra ianao ato ho ato. Um Ah, tsena tsy azo hanina amin'ny farany.
Inona? Izahay sy Maryland dia nanasa ny akanjonao aty amin'ny fanjakana Washington. Ny iray amin'ireo antony nahatonga azy ireo hanina, ny tsenantsika dia nanasaraka an'i Kristy Andriamanitra. Nahary olona ianao ary alaivo sary an-tsaina anao
dia mety hihinana ahitra.
Tsy maninona ny maniry any DC Fa ny mpiara-monina aminao tsy manana fotodrafitrasa akory. Ara-drariny
ho be ah, izany no tiako holazaina, misy. Ny tiako holazaina dia ny tiako holazaina, fantatsika tsara fa maro ny olona sy Google, tsy izany ve no hitanao, izahay mponin'i Maryland ary olona marobe izay tena miloko na zavamaniry fanodinana amin'ny fironana volondavenona Maryland Ary be dia be ny fikarohana porofo manamarina an'io olana io fa isaky ny mitondra izany miverina mamakivaky io tsipika fanjakana io ianao dia midika izany fa satria faritany akaiky io. Ny tiako holazaina dia, fantatrareo, fantatrareo, nijery ny sisintanin'i My Maryland aho. Mahatonga azy io fotsiny, fantatrao, misaotra, toa tsy mbola hitantsika ny ankamaroan'izany. Fifanolanana misy eo amin'ny sisin-tany, fa miaraka amin'i Maryland, satria ity fitsaboana ity mbola hotohizantsika ny ady dia ny fandefasan'izy ireo mpitsabo tena manan-tsaina tokoa momba ny ara-dalàna mandra-pahitany ny zon'ny mpitsabo. Toy izao. Tsy manana izy ireo, tsy misy vondrona miasa. Rehefa niresaka momba ny toerana nandidiana azy ireo bebe kokoa izy ireo. Ny ady hevitra fanoherana dia tsy ady hevitra. Jereo, tsia, tsia. Eny, tian'izy ireo kokoa ny, Andao hiandry fotsiny. Ary heveriko fa tsy fantatrao izany, izany no zava-nitranga
amin'ny fidiran'ny marary. Ny fanafody ataon'izy ireo
ankehitriny. Eny, eny, eny, eny,
Eny. Zava-dehibe ny fotoam-pampianarana Maryland,
saingy, sahala amin'ny, manana ampy azy ireo ve ianareo? Ny tiako holazaina dia toy ny hoe tsy nahorona ny rafitrareo manontolo ianareo.
Ie, tsy nisy natao maimaimpoana na volomparasy navoaka tamin'ny fihodinana voalohany. Ary toy ny efa nolazainay, manodidina ny 90 eo ho eo no nahazo alalana hatreto. Ka mbola misy, fantatrao, fantatrao, am-polony dispensaries, na heveriko fa tsy tokony hisy hafa. Eny, miaraka aminao aho. Uh, fanontaniana mpandihy.
Nitarika ny mpanao lalàna tamin'ny 2024. Marina izany, Johnny? Eny. Eny. Aiza no azon'izy ireo alohan'ny hanantenany ny fizotran'ny fahazoan-dàlana. Inona ny malaza?
Andraso. Eny ary, ka azo eritreretina ve ianareo fa tsy hanana olon-dehibe ara-dalàna alohan'ny 2024? Tsia, tsy hanao izany aho
lazao izany. Tsy hiteny an'izany aho. Um, amin'izay vao afaka ry zareo. Arakaraka ny maha-zava-dehibe azy rehetra amin'ny lisansa fizarana fanafody bebe kokoa. Yeah. Zava-dehibe izay fitsaboana hataontsika
manaova zavatra mitovy amin'ny nataon'ny fanjakana hafa rehetra. Raha vantany vao mandeha ianao dia aza mampiasa ireo. Ny mpitsabo iray dia samy manana fahazoan-dàlana.
Ie, mpankafy anay fotsiny izany. Marina tanteraka izao.
Inona no ataonao ry zalahy? Ny fahalalana ny firafitr'izy ireo
ny Virginia sy DC. Inona no mitranga any Virginia?
Izahay dia handeha
mandehana, Johnny, mandroso.
Yeah. Ny hetsika nentim-paharazana any Virginia dia nilaza fa noho izany dia manana karazana programa hemp indostrialy hemp izy ireo. Eh, mitohy. Manana programa marijuana mpitsabo ah, kely, ah, akaninjaza izy ireo. Andao antsointsika hoe, Fantatrao fa manana izy ireo. Ah, namoaka dimy izy ireo tamin'ny antso ho an'ny fahazoan-dàlana mety tsy azony. Ka tsy misy ny fizotran'ny fahazoan-dàlana mitombo, ny fifandraisana, ny lisansa dispensary. Iray ihany ny fahazoan-dàlana mitsangana. Fantatrao, ny manana fahazoan-dàlana tsirairay ary ny azon'izy ireo atao dia ny mamokatra kilasy ambany e
ambara ihany koa fa Izay
Yeah. Ka, Um ary avy eo izy ireo fa v haba. Fantatrao ny departemantan'ny varotra Agon ho an'ny mpanjifa any Virginia, tena nihetsiketsika mialoha ny FDA izy ireo, ary ary, fantatrao, fa manana fahazoan-dàlana sy fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa indostrialy sy mpamokatra hamokatra vokatra CPD azo tsidihina ary misy manambady . Tsia
mahalala. Hilaza fotsiny aho. Ny tokonam-baravaran'ny CBD ao Virginia dia 5%. Izany no lanjan'ny fanafody nampitondraina ny isan-jato,
Ny tiako hambara,
Izaho dia tantsaha iray nanandrana nitombo dimy tao amin'ny TA C. I, toy ny mihodinkodina ny masoko amin'ireo bandy tsy ataonareo ireo ary miteny, toa, tsy fantatray izay lazainao, sa tsy izany? Saingy, um uh, fa tsy misy efijery, saingy ny hemp indostrialy amin'ny ankapobeny dia toa ny karazana 1 ka hatramin'ny 1 maraina, mila mamorona azy ireo ianao na piket aloha. Tsy tokony haka azy io aloha ianao, fantatrao, na izy ireo, fantatrao fa mahatonga anao hamadika azy io ho simika iray izay tokony hanaovanao fitrandrahana ary hifehezana ny isan-jato mifanaraka amin'izany, izay adala. Fa ahoana
momba an'i Virginia dia tena nandroso tokoa satria izy ireo na dia programa fitsaboana kely aza dia haingana kokoa noho ny niadian'ny olona izany. Ary ao amin'ny Watcher azy, kely sy mazava ho azy, fantatrao, ampidiro am-baravarana miaraka amin'ny indostria ny tongotrao. Ho hitan'izy ireo ny vola miditra ary hitombo izy ireo. Fanantenantsika izany. Ka, Virginia, farafaharatsiny miaraka amin'ny heloka bevava miaraka amin'ny fihenan'ny fiampangana sy ny entana ao aminy. Hafahafa ny fandrosoan'i Virginia tamin'io lafiny io. Manantena aho fa hitohy. Inona ny hevitrao?
Yeah. Ny tiako holazaina dia heveriko fa mbola ho lasa matihanina ihany izy ireo. Ary heveriko fa feno ny programa fitsaboana feno, ary tsy lavitra izany.
Ary avy eo rehefa tafavoaka ny sakana aho, asehoy ny seho. Ah, ny fahazoan-dàlana hemp Florida tsy voafetra dia misy amin'ny Janoary. Mbola zavatra ve izany sa efa nikatona sahady.
Oh, ny Florida ary
Georgia. Jereo, manaraka ny sakanao koa aho.
Ie, noho izany dia tena nazoto tokoa izy ireo. Midika izany fa tena mazoto tokoa, mamoaka fahazoan-dàlana. Ie, ataontsika izany. Manao asa vitsivitsy any Florida izahay miaraka amin'ity mpiara-miasa aminay ity izay manana fahazoan-dàlana etsy ambany. Ka izahay Ah, vao nandinika ny indostria izahay. Ary, um, tsy betsaka ny fahazoan-dàlana fikirakirana na zavatra hafa toa izany navoaka. Fahazoan-dàlana fotsiny ho an'ny mpamboly sy ny mpamokatra. Mino aho fa nankatoavin'ny S u SD a ry zareo. Ka heveriko fa tsara handeha izy ireo, saingy tsy nijery azy aho tao anatin'ny roa herinandro. Ka ho azy izany, Michael, sa tsy izany? Yeah. Ie, Ie, eny, eny. Tsy manana mpanjifa izahay. Miala tsiny aho. Ny toerana rongony rongony any Florida. Eny ary,
midira any Florida. Misy ihany ny vola voafetra,
sa tsy izany? Saika izany rehetra izany.
Ward izany fa rehefa manana vaovao momba an'i Virginia aho dia mampieritreritra ahy momba an'i Florida fotsiny. Ary toy ny,
Eny ary, te
midina amin'ity lalana ity? Handeha amin'ny lalan'i Onley ianao, avelanao any amin'ny fanjakanao i Budweiser, sa tsy izany? Mazava ho azy Budweiser Miller. Ireny ihany no olona manana an'io karazana vola io. Ary raha ny marina, rehefa hitako izay ilain'i Rice an'i Washington, miantso any Colorado, toerana misy dite misy anao, ny tsirairay dia mila mahazo icicle keliny manokana. Tsy misy fahazoan-dàlana iray mitokana sy mitsangana tanteraka satria firy ny olona manana 50 tapitrisa $ mijery ilay fampisehoana?
marina, miantso tombony. Ary noho izany dia afaka mahazo $ 1,000,000 ianao hanokatra dispensary iray na roa izay misokatra bebe kokoa amin'ireo sakana, ny fidirana, izay mbola avo ihany isika. Ary avy eo manandrana miresaka an'io zavatra ara-tsosialy ara-tsosialy io izahay ary manao azy amin'ny fomba azo ampiharina, tsy misy dikany izany, um, manana izany ianao izay hitazona ny olona rehetra hivoaka tahaka ny, OK, izahay miezaka. I Thio dia mampiditra ireto olona voan'ny lalàna ireto. Ka mandehana mitady izay misy $ 50 tapitrisa. Ary avy eo rehefa vita ny faran'ny N b A. Mandehana any amin'ny mpilalao NFL ny mpilalao. Ary noho izany ry zalahy ireo dia tsy manana $ 50 tapitrisa fantatrao, um,
marina izany. Ka ny olana dia eny, fa izy ireo dia namoaka fahazoan-dàlana mitsangana any Florida, izay, toa anao, nilaza fa ny tiako holazaina dia mila manana fihenan-dàlana matotra ianao aorian'ny fidiran'ny orinasa ary mijanona eo. Um, misy ny fanohanan'ny Fitsarana Tampony navoaka mandra-piandry izay hanapa-kevitra raha izany no maraina sy
miandry. Miandry an'io miaraka amina fofonaina mifototra isika satria vaky io, ary manana Ah, ny rahavaviko mipetraka any Tampa. Uh, okay. Ary noho izany ary mpisolovava koa izy. Karazan'asan'ny fianakaviana izany. Mpisolovava koa ny raiko. Okay. Um ary toy izany, milaza azy fotsiny aho hoe tiako, Okay, Mary, izany no anarany. Mazava ho azy, eh, rehefa alika io dia nandeha naka io tranga io aho dia atsipy io. Hametraka pin ianao eo. Antso. Toy ny hoe tsy mino ianao, fantatrao? Um, eny,
eny, mahatalanjona. Fantatrao fa, misy koa ny lalàna miandry izay hahavita ny vokatra mitovy? Mino angamba aho
Angamba mbola tsy nanao izany aho. Tsy dia niditra an-tsehatra loatra tamin'ny zavatra very tany Florida aho satria ny sasany toa tsy dia tonga intsony ary mora ny miditra amiko. Ohatra, Kentucky, Missouri, eh, banky any South Dakota. Ho hitantsika eo hoe ahoana izany. Um ary avy eo dia tena liana amin'ny Pennsylvania aho satria nanana fampiasana olon-dehibe ara-dalàna. Ary na dia New York aza, satria nanana fampiasan'ny olon-dehibe ara-dalàna izy ireo ary toa nosoratana tamin'ny fomba fanampiana olona tsara fanahy izany, midika izany fa maro ny olona mitsiky amin'ny fananana SoCal, ary tokony hamaky tokoa ny endrik'i Illinois izy ireo. Ary i Illinois dia mametraka ny lalàny rehetra amin'ny Internet, ary tena vitany tsara izany. Ka na iza na iza te hamaky ny hidin'i Illinois ka hahita azy mora foana ary avy eo dia vakio ilay fitoviana ara-tsosialy iray manontolo mba hahitanao ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny isa sy ny endrika rehetra ary ny zavatra tokony hiditra ao amin'ilay fampiharana. Ny fomba nanamarihana ny fangatahana, hoy ny tovovavy nambara tao anaty hidin-trano. Ka ny toerana hafa toa an'izay any ivelany dia afaka mahita ny fomba nanatanterahan'i Illinois azy. Raha tianay dia fantatrao fa mahazo milionera kely marobe. Ary raha te hanampy amin'ny famerenana ireo faritra naratra indrindra tamin'izy ireo koa izy ireo, dia afaka mamorona karazana rubric mpanao lalàna isika. Ary avy eo koa ny lalàna dia misy fiantraikany amin'ny fomba fanaovana ny fampiharana. Ary misy fiantraikany amin'ny mpangataka izany satria tsy maintsy mamorona orinasa vaovao ianao. Ny maha-izy azy ny tatitra dia ny fihazonana ny fahatokisana na ny iray aza ary ny Andrefana dia misy zavatra voaroaka mafy. Raha tsy izany dia tsy handresy soa
point. Fantatrao, manana fepetra takiana amin'ny fonenana aho. Manana ny fahazoan-dàlana momba ny asa-tanana izy ireo. Midika izany, heveriko fa ny iray hafa, ny olon-dehibe tamin'ity programa ity dia, Eny, io no tsy notazonintsika na ny ohatra. Manantena aho fa handray baiko i Maryland. Ny tiako holazaina dia hoe, fantatro ilay lehilahy. Ilay solontena nanohana ny volavolan-dalàna momba ny ara-dalàna, Maryland. Karazan-tantely manandrana izy. Manana karazana fahazoan-dàlana asa tanana mitovy na kely kokoa ianao.
Mahazo izany satria mbola hamoaka 1.5 ka hatramin'ny 2 tapitrisa maimaim-poana, toy ny taorian'ny taona lasa, izay tsara, orinasa kely mahafinaritra ary
nanana, fantatrao, ny kolontsain'ny fahatezerana sy ny dispensary. Vahoaka mifampitohy, mpamboly, manentana, fampidirana mitsangana. Azonao atao ve ny mahazo ny vola betsaka indrindra omenao ny tenanao? Manao Môrmôna?
Uh, tsara fanahy. Fa misy antony tsy fananan'i Budweiser bara. Manadino mandeha any amin'ny fety. Budweiser dia misy ifandraisany amin'ireo rafitra fanaraha-maso alikaola telo izay be ny tranon'ny rongony na somary manaraka azy satria fantatrao fa nampandoavina hetra amin'ny haavon'ny fambolena izany, ary avy eo fonosiny mitovy amin'ny haavon'ny antsinjarany. Tsy tena izy isika. Heveriko fa tsy mbola mahasalama azy ireo izany noho ny IRC 280 e. Heveriko fa toy ny karazana frais FedEx ho an'ilay mpitatitra izany. Mpitatitra izany. Olona hafa no mitazona ny fiaran-dalamby Fort Lifetime, izay misy dikany indrindra ho azy izany. Eh, mety ho toa an'ireo dispensary aza, satria azon'izy ireo natao izany. Saingy ny fandaniana fanampiny ihany io, fantatrao? Eny,
Nieritreritra an'izany ianao, ilay tsimoka dia bara misy ihany. Tsia, eh, sendra mandeha mamaky ny firenena indray mandeha ary mijanona eo amin'ny labiera sy, um, Colorado. Ary izy ireo dia manana, sahala amin'ny hektara an-jatony manodidina azy. Ah, toa azy ireo ny tanimbarin'ny orza. Ah, manana lalan'ny lamasinina mandeha mamaky ny taniny rehetra izy ireo. Izy ireo dia afaka mameno ny entana rehetra. Mahafinaritra tokoa ny mahita azy. Azoko alaina sary an-tsaina, toy ny fivoaran'ny canvas ho eo amin'ny ambaratonga mahatalanjona ny mahita anao mahalala,
ataovy io. Andian-soavaly Clydesdale izahay izay mitondra kitapo sy diky.
Manana Clydesdales ao ry zareo. Tena nahafinaritra. fa
toy ny lalao baseball ligy lehibe indray indray andro any, Um, isaky ny misy izany. Ary manana, toa, fantatrao, tsy fantatro aho, ary azo antoka fa manohana mandritra ny fotoana tsy voafetra. Misy zavatra fantatrao?
Eny, izany no iray amin'ireo zavatra nananan'i II olona. Tsy tadidiko hoe iza, fa ary ataoko be dia be amin'ireto seho ireto, saingy ah, hi fi hops dia vokatra iray, vokatra iray hatramin'ny taona maro lasa. Ary noho izany, raha izany dia ho zavatra ao anatin'ny taona X, mandeha any amin'ilay lalao baseball ianao ary toy ny Budweiser izao, toy ny miligramin'i Anita 10
marina, tsara, ny tonon-taolana izay hizaran'izy ireo olana amin'ny mpiray dia mety manjavozavo fotsiny satria, toa, eh, mifoka sigara fa tsy misy sigara mbola ho eo. Ho toa an'i Hey ry sakaiza ry zareo, tsy mifoka sigara. Fantatrao,
volabe miaraka amin'ny sigara tsy mifoka sigara satria zavatra izany Raha teo ny tsenantsika teto, eh, satria afaka mihinana ao anaty trano izahay, ary tsy nanery zavatra ny olona. Ah, saingy ah, iray amin'ireo tsena ankafiziko indrindra, nandaka ny rehetra izy ireo. Ny mpifoka rehetra dia tsy maintsy nandeha nifoka tany ivelany satria tsy tian'ny olon-kafa izany. Saingy avela hifindra ianao. Tianao ity lafiny ity satria tsy nitovy ny hatsaran'ny rivotra.
Inona? Ah, kepner Macallan Ataonao ve? Noho izany, ny rafi-dalàna dia karazana Tom izay manao fifanarahana nefa tsy fantatra. Izany ve no mahomby?
Eny, efa mpangataka fanarahan-dalàna. Fantatrao fa manana fangatahana fahazoan-dàlana izahay any Maryland, saingy, eny, asa fifanakalozana, fananganana orinasa. Um, fantatrao, fantatray, fantatrao, ny filankevitra fotsiny Mazava ho azy fa natao tany ivelany, jeneraly, fantatrao, be dia be ny torohevitra ankapobeny any ivelany momba ny asa sy ny zavatra toy izany, saingy, fantatrao, miasa miaraka amina fanombohana marobe isika , ka manana izany zavatra niainantsika izany isika. Izy io dia karazana indostria fanombohana voajanahary.
Eny, ampy izay. Ary halako ny fahazoan-dàlana mitambatra satria misy indostria mifandraika amin'izany. Ary rehefa manao ny fiainana mitsangana ianao dia manodinkodina ny zorony fanombohana rehetra fotsiny. Toy ny sakaiza io. Andao handeha hazakazaka 50 tapitrisa $ Afaka manana lisansa aho. Tsy miaraka aminao aho, bro. Andao hanangona 1/2 amin'ny dolara ary hanokatra dispensary. Andao hanao izany. Fantatrao, um, mandeha fotsiny io. Eny, tena mahatalanjona izany. Ary tena ankasitrahako ianareo lehilahy tonga amin'ny fampisehoana. Mizarà fahendrenao. Um, aiza no heverinao fa ho ara-dalàna ny manaraka?
Eny, MEREDITH ary izaho dia niresaka, um, fantatrao, tsy fantatro, fa tiako aho raha nilaza aho fa miresaka isika, oh Oh, mieritreritra aho fa iray amin'ireo fanjakana atsimo, avy any Memphis aho , Tennessee, tany am-boalohany, Ary reko ny tolotra nataonao momba an'i Mississippi ve ianao? Tsy haiko raha ho ny ampitso ianao, fa, um, Tennessee, Na, toa, fantatrao, Tennessee Erkan miresaka eto na iray amin'ireo fanjakana heveriko fa mety
okay, satria eo an-tampon'ny Kentucky kely aho. Kentucky manao.
Tsy dia fantatro loatra ny momba an'i Kentucky. hoe,
uh ahoana ny amin'i Tennessee? Tena manana volavolan-dalàna tokoa ve izy ireo satria manana volavolan-dalàna i Kentucky?
Ie, Tennessee dia manana faktiora. SP 2334 Izahay
nanao an'io. Fa i Lauren, midina SB 2334 mila manao zavatra kely izahay. ary
inona no mety handany na inona na inona
Manomboka isika, manomboka aloha ary manavao hatrany, noho izany, fantatrao fa io no iray amin'ireo zavatra, ary avy eo tsy maninona. Tsy azoko antoka hoe hitombo firy ny lobbying, saingy ireo olona ireo, ireo olona manoratra ireo zavatra ireo, azontsika atao koa ny manandrana mampiditra azy ireo amin'ilay fampisehoana. Ary avy eo mahazo isika Ka ahoana izany? Ahoana no nahatonga anao ho tsinontsinona, fantatrao,
izao, mino aho fa misy volavolan-dalàna vitsivitsy mifaninana, saingy mino aho fa hamela izany amin'ny heloka bevava ary hamela izany ho an'ny paositra hanatanterahana ny fitondrana lisansa, hoy aho.
Saingy tsy maintsy mijery an'io mahatsiravina io isika amin'ny dikany fantatrao, andao, ireo faritany ireo dia tsy manana fahaizana manao radio kpmg todo avo kokoa, ireo rindranasa izay hahazo ireto fandefasana rehetra ireto, ary avy eo ianao dia handeha fantatrao ve,
toa vola any afovoan-tanànan'i Nashville io, fantatrao, any Nashville. Ka tsy haiko. Tsy tiako izany ao anatin'ny rafitra politika any, na amin'ny fomba ahoana, fa izaho sy MEREDITH dia niresaka tamin'ny ankapobeny, ny fepetra momba ny fanarahan-dalàna dia aorian'ity krizy pandemika ity. Fantatrao, antenaina fa fantatrao fa vita ary miverina amin'ny laoniny ny raharaha. Fantatrao, faritra, mila vola miditra izahay mba hialana amin'ity korontana ity. Ary hijerena miharihary kokoa ny volavolan-dalàna momba ny rongony amin'ny ho avy koa izy ireo, ho fitaovana iray ahazoana ny vola miditra ilain'izy ireo hialana amin'izany. Ity Mets ity, tsy izahay no manadihady fahefana manokana, fa ny momba an'i D. C, ny solontenantsika dia nilaza izany, sa tsy izany? Mary
Holmes Norton dia miezaka ny hanana vatsy amin'ny stimulus manaraka nangalatra ny lasa. Izany dia hanala ny mpanoratra. Um, tamin'ny ankapobeny dia nanambara ny mpanoratra sy ny vatom-pifidianana. Ka mpiady ianao
miresaka ny zavatra ao amin'ny D. C manakana
Antsoinay fa ny Polarized izany. Ny mpanoratra Harris dia karazana mpanjanaka
vonona. Misy estoppel ara-pitsarana ve amin'izany? Toy ny Okay, ka raha avela tanteraka izany dia ao amin'ny D c. Afaka mampiasa izany ve isika mba hisakanana ny Edulink an'ny lalàna mifehy ny zava-mahadomelina. Misy ve?
Ie, azoko antoka fa hisy niggling kely. Manontany an'izany ve ianao
Litigation? Thio Amboary io fahavetavetana io amin'ny ambaratonga federaly, ny fandaharana rongony miaraka amin'ny heroin dia tsy mbola nisy fahombiazana hatrizay. Ary noho izany tsy haiko fotsiny raha mamela izany ny faritanin'ny DC ary avy eo tsy mamela izany fotsiny fa manasazy ny fivarotana azy dia vilona intsony. Saingy tsy raharahainay fotsiny izany na hiteny ry zareo hoe, O, tsy nanamontsana ny fitsaboana ara-pitantanana ianao.
Eny, ny zavatra noteneniny dia nilaza izy fa Fantatrao, izahay ao amin'ny DC Satria tsy fanjakana ao amin'ny vola fonosana stimulus no omena an-tsehatra. Vao nahavita faritany mpampihorohoro izahay ary tsy nahazo famatsiam-bola firy noho ny fanjakana hafa mijanona eo
fa tany amin'ny toerana mafana kokoa ry zalahy. Avy eo izahay dia ao Illinois. Na dia miaro ny andro ratsy indrindra aza isika hatreto, tsy misy dikany izany raha oharina amin'ny toerana mety nareo
tsara, fa ankehitriny isika tsy afaka. Tsy tsikaritray ny vola miditra amin'ny tsena volondavenona, fantatrareo fa izany no izany. Saingy mety ho zavatra iray hividianantsika fahefana avy amiko ny fiandrasana mandra-pahatongan'ny tetibola federaly manaraka? Izay amin'ny fararano. Fantatrao fa afaka nanala izany fotsiny izahay. Ankehitriny. Azonao antoka fa ianao no lakolosy? Ny ben'ny tanàna dia manana volavolan-dalàna izay navoaka ny volana aprily lasa teo. Fantatro ary ianao fa tsy faktiora lehibe. Aza mahazo manomboka amin'ny volavolan-dalàna aho. Saingy io no ho dingana voalohany. Ary heveriko fa azon'izy ireo atao haingana ny mamaky karazana lalàna vonjy taitra any amin'ny filankevitra, izay ambany ny Antenimieran-doholona. Atreho ny fivoahanay. Ny antsika izao
Ny fanafihana dia mahazo ianareo ry zalahy Misy koa ny asa noforonina. Ny tiako holazaina dia hoe, be dia be ny vola miditra izay alaina amin'ny alàlan'ny famelana marina azy hitranga fotsiny, efa mitranga io. Eny, misy vinavina ve hoe ohatrinona no tsy azonareo rangahy?
Oadray, ny tiako holazaina, satria tsy fantatrao tsara Ny olana dia tsy ireo orinasa rehetra ireo, raha milaza amin'ny taratasy fametaka taratasy izy ireo, efa voasoratra miaraka amin'ny orinasam-pokonolona mifanaraka amin'izany ve ka mandoa ny varotra dia mandoa haba momba ny varotra amin'ireo tarehimarika ireo, sa tsy izany? Super ward dia tena tsy ho toy ny manandram-tombana ny isan'ny maty any Wuhan, Sina,
ny hany tokana tsy azontsika
tsy hoe tsy hahazo vaovao tsara ianao, tsia
mieritreritra fa marary amin'ny mpanjifa izahay. Ny fomba tokana hanehoana fa ohatrinona ny vola azon'ny tsena volondavenona dia rehefa misy bemidina any amin'ny fivarotana lehibe na fanampiana olona ary mahita vola be izy ireo. Ary mamaky momba ny vola hitany ianao. Ary ianao dia toy ny, Eny, fantatrao, ianao, mihetsika ny toekarena. Tsy misy milaza
ny olany. Olana izany. Satria ianareo izao dia manana mpandraharaha tsy manana fahazoan-dàlana mahazo vola ary tsy tian'izy ireo, toy ny tsia, tsia, tsia. Ianao sy ny lalànao. No,
ianao io. Ary io no karazana tsy noresahan'ny volavolan-dalàna ben'ny tanàna dia ny fomba hanaovanay karazana atidoha mora foana amin'ireo mpandraharaha tsena volondavenona ireo raha avelanao hanana lalana ara-dalàna izy ireo. Ny tiako holazaina dia antenaina fa tsy mieritreritra anao avy any Kalifornia izahay, fa zavatra toa izany no tokony hitranga. Tsy nilaina ny tondra-drano sasany izay handeha. Eny,
C eto raha ny mpitsabo no niezaka ny ho ara-dalàna, fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa, avy eo manandrana mandray ny hetra nasionaly ary manome izany ho an'ny tanàna toy ny Hey, ity ny hetra. Inona? Ianao dia handoa hetra ity. Hitanareo izany ve?
Mahaliana izany. Ny olona, ​​ny olona fa izy ireo dia manandrana manao zavatra toa izany toetra izany. Tsy hiteny aho hoe mitovy izany, fantatrao. Izy ireo dia misoratra anarana amin'izay orinasa misy karazana varotra antsinjarany, ary hosoratany amin'ny departemanta eo an-toerana izany. Ary handoa hetra amin'ny entana enta-mavesatra rehetra amidiny izy ireo. Izay no betsaka. Tsy misy olona manome haba raha tsy izany
lalana. Tsia, matahotra aho sao hesorin'ity distrika ity. Tsy haiko na miteny na tariby ry zareo, fantatrareo fa mahaliana izany. Izaho izany
eritrereto fa izany no antony namoizantsika ny fitsaboana teto, satria nanomboka hitan'izy ireo fa mahazo vola telon-taonina ry zalahy izay azon'izy ireo atao. Fantatrao fa hafahafa ny mandre teboka iray satria ny vola rehetra, na izany aza, Ka vola 30 dolara no azoko amina telovolana mpifanila vodirindrina ary toy ny hoe, Eny, izao izahay dia manampy 6% milaza haba satria izany no fanasan'ireo mpanasa lamba. mahalala haba, ary hametraka izany fiarahamonina vola izany izy ireo. Amin'ny lafiny teknika, tsy haiko, satria indray, mety misy vola fanampiny fotsiny ho ahy.
Fa izany no fomba ezahin'izy ireo atao ara-dalàna, satria ny fiadiana amin'ny volondavenona Martin, dia tsena volondavenona. Tsena mainty, tsena nolavina tsy maintsy lova lova inona? Ahoana ny fahitako azy, Tsy manandrana mamily ireo lehilahy ireo amin'ny asany ianao, Fa ny mpamory hetra kosa angamba tokony handondom-baravarana ka hanao hoe, Tompoko, eto izahay hanadihady ny asanao mifanohitra amin'ny, toy ny, mandaka ny varavarana. Fantatrao, ekipa SWAT, volon'olombelona toy izany mba hisorohana azy tsy hamindra. Fantatrao anefa fa toy ny hoe tsia, tsia, fantatray fa mivarotra ianao. Fantatray fa manana ianao, fantatrao, miorina amin'ny zavatra fantatray, fantatra amin'ny tombana nataonao tamin'ny fanaraha-masonay, heverinay fa 50,000 50,000 $ no aloanao amin'ny hetra tsy voaloa. Ary raha mandany izany $ 19 amin'ny haba tsy voaloa ianao, dia hanome alalana anao izahay ary avy eo fantatrao fa tokony ho ianao dia tokony handoa ny hetranao ary tena izany tokoa Ilay zavatra, fantatrao, rehefa mandamina an'io ianao, maninona no fehezinao amin'ny sisin-tany XNUMX io noho ny karama, ary tsy noho ny fanaovana heloka bevava izany. Ary tsy noho ny fiezahana hamorona ireo toe-javatra ireo, toy ny any Maryland na any Massachusetts, izay ahitanao ny kolikoly amin'ny hery rehetra. Raha misy mpandraharaha tsaratsara kokoa amin'izao fotoana izao manompo an'io tsena io sy manome taratra azy ireo ara-dalàna, maninona ianao no tsy maniry ny hanafika azy eo amboniny ary miteny hoe, Eny ary, isan-jaton'ny mpamory hetra izahay mitomany toy ny eh, ahoana ny momba ny hetra? ianao
eny, teboka tsara izany.
Ny lafin-javatra mahafinaritra amin'ity faritra mihidy ity dia ny faritra iray amin'ny lalàna izay nipoitra tamin'ny hevitra noforoninao. Ary noho izany, toy ny, fantatrao, ny ankamaroan'ny lainga dia niantso indray izy ireo rehefa afaka mamoaka ny iray amin'ireto aho? Manana fatorana tsipìka aho, fa sahala amin'ny tsy maintsy niakarako, nampiarahiko tamiko toy ny, Oh, crap, mila mihetsika eto aho afaka 10 minitra. Bang, fantatrao, ary fitsarana tsara fotsiny izao no hiady hevitra momba ny antony nahazoan'ny mpanjifanako ny fitsarana famintinana noho ny tsy fandoavany tsara ny tsy fahombiazan'ny voampanga. handoa amin'ny taratasy mora mora handresena an'io. Ary ah, saingy fantatrao fa izany dia milamina tsara toy ny fitsipiky ny lalàna mazava ho azy fa voahidy tsara. Ny fitsipiky ny hidin-trano rongony dia mbola tsy misy
tsy izany ihany fa tsy milamina tsara, fa tsy milamina. Ary ny zava-misy fa manana tentacles be dia be izy ary manohina faritra maro hafa amin'ny ambany. Ary rehefa mitranga izany dia misy olona ao amin'io faritra io sahala amin'ny tena handinihantsika izany. Ka ankehitriny manana amerikana isika izao manana trano rongony, fantatrao, raharaham-pitsarana. Manana rongony izahay, fantatrareo, mpiasa miasa fa ianareo dia kely foana
io rehetra io dia tonga amin'ilay fiasan-dalàna mifehy ny lalàna federal federal satria manana trano ianao dia inona izany? Manana ny vola federaly ianao ary avy eo dia nanana izany, Fantatrao, ny lalàna Amerikanina Tsy Miankina amin'ny zava-mahadomelina dia 30 taona lasa izay, ny fahazaran-dratsy amin'ny zava-mahadomelina dia midika fotsiny hoe tsia, tsia, miandry. Tsy henjana amin'ny asan-jiolahy, fisamborana mpivarotra zava-mahadomelina na rongony. Fantatrao, hadalana izany, fa tamin'ny sivifolo, fantatrao. Tsy nahalala na inona na inona izahay. Ny seranana an-tserasera dia hiakatra hatramin'ny 1991 noho ny antsoantso mafy. Inona
mieritreritra ve ianao
Valo tamin'ny taona fahasivy izany?
Nandoa $ 60 teo ho eo ho an'ny fahavalo tsara aho tamin'ny faramparan'ny taona sivifolo. Tamin'ny taona 1998 rehefa nianatra tany amin'ny oniversite aho dia freshman. Ah, ary nanomboka nifoka sigara aho. Ary noho izany raha mila fahavalo amin'ny tanky ianao ary toy izany, ny dank dia hanana anarana, eh, fantatrao fa misy blueberry Bubba Kush. Afghani isa voalohany no tena malaza 20 taona lasa izay tany Illinois. Ary ah, vola 60 izany ho an'ny karazany fahavalo Na afo mirehitra. Tsy misy afo toa ny dimy taona lasa. Fantatrao,
ny booties avy amin'ny
Big Bud dia eny, NBC. Marina izany. Ny tiako holazaina dia ilay taloha taloha
Ny sambo mpiady sy ny mazàna no azonao, Thea, azonao ny lisitry ny mpivarotra, hey, ho anao, 60 izy ity
fitiavana in-droa. Zavatra iray ny, eh,
milalao. Ny zavatra mahafinaritra indrindra dia ny mpitsara iray miteny hoe, Reggie, Reggie, Reggie, andraso. ianao
tsy afaka mandeha. Times nahazo an'io lohateny io.
Tsara izany, tadidio izany. Azoko, fantatrao, fotsiny, faingana haingana. Ekena. Na izany aza tsy misy mpitifitra pro, na eo aza ny bokotra raha tsy eo an-tampony ianao raha mora kokoa izany raha tsy izany dia sarotra kokoa. Fa raha ny tolona ataon'izy ireo satria raha tsy hahomby ianao dia azonao atao amin'ny fahitalavitra mivantana izany satria tsy fahitalavitra YouTube izany. Ary hitanao ilay zavatra. Eny, mety hitantara aho raha ny marina. Ny ataoko dia manohitra ny fanaovana azy fotsiny. Voalohany, karazana tsy miankina ianao toy ny mahazatra. Tsia ary avy eo apetranao eo io, alaiko ny tsipìka ary apetrako io zavatra io. Ary izany no afovoany. Ary avy eo ianao dia niara-nanintona ireo lafin-javatra roa ireo, ary avy eo dia nalainao io ampahany io, izay ny filokana, ary avy eo atosinao mamaky ity lavaka nataonao ity toy ny hoe mamatotra fotsiny fa tsy. Ary avy eo, ah, eto no ahafahanao mandany dimy minitra. Azonao atao ny mandany tontolo andro manamboatra azy io, satria ankehitriny ianao manandrana mametaka ny rantsan-tanananao iray rehefa manintona azy ianao, ao anatin'ity izahay
iray. Tena teo ilay izy, ary
mitety trano, ary manandrana tsy manary ny ilany hafa ianao, ary avy eo ianao dia mahazo karazana asa miaraka amin'izay. Ary fantatrareo tsara, tsara izany. Hatoroko azy tsara io ary hataoko tsara tarehy kokoa raha toa ka handeha eo alohako aho. Oh, mpanamory banky aho nandritra ny taona maro.
Andao hitifitra haingana ihany koa amin'ny tranokalany. Miala tsiny, fa nanapaka anao ianao. Miaraha amin'i MEREDITH sy Johnny ao amin'ny tranonkalany. Kepner dia nanao gana iray. Tsy misy fanjakana iraisana dot com.
afaka mivoaka tsy ara-dalàna ve ianao dot com Izany ny famoahana haino aman-jery ah izay mitatitra ny vaovao momba ny rongony isam-paritra. Raha manao tatitra tsy ara-dalàna ianao. Ie, izany no anay Gazetinay, dia ny gazetinay. Antsika izany
Ny tiako holazaina, ah ro fampiasana media.
Izy io dia manavao azy io. Eny, fantatro fa tsy nanao izany mihitsy izy ireo, satria izy ireo ao amin'ny tatitra tsy ara-dalàna dia manamarina ny vaovao rongony marobe ary miditra amin'ny lisitry ny mailaka ataon'izy ireo. Hainao ve fa? Tsy nahazo ny mailaky ny tovolahy aho. Misoratra anarana ianao. Tsara daholo, Misaotra, ry zalahy. Tena mankasitraka anao aho tonga amin'ny fanampiana anay hahatakatra ny morontsiraka atsinanana. Ah, lalàna rongony. Misaotra, ry zalahy.
Nahasalama Andriamatoa. Hoy aho fa